सरकार ढाल्ने काम कांगे्रसको प्राथमिकतामा पर्दैन – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
१४ कार्तिक २०७७, शुक्रबार ०७:५१ English
सरकार ढाल्ने काम कांगे्रसको प्राथमिकतामा पर्दैन
महमद आफतव आलाम, कांगे्रस नेता
० राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनमा कसरी छलफल भइरहेको छ ?
– आयोगको प्रतिवेदन संसदमा प्रस्तुत भएको अवस्था छ । त्यसमा छलफल जारी छ ।
० कसकसले के भने ?
– संविधानसभामा जति पनि पार्टीहरु छन्, ती पार्टीका प्रतिनिधिहरुले आआप्mनो धारणा राख्ने काम सुरु भएको छ । अहिलेसम्म राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिनिधिलाई उनीहरुले ठीक मानेका छन् । कांगे्रस एमाले उपयुक्त रहेछ भन्ने त्यहाँ देखियो ।
० कि उपयुक्त रहेछ ?
– देशको अखण्डतालाई चुनौति दिने खालको जुन प्रतिवेदन पेश भयो, त्यसले देशको अहित गर्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्दै पर्दछ । क्षेत्रीयताका आधारमा राज्य पुनर्संरचना गर्नुहुँदैन, यसले भोलि देशको एकता र अखण्डतालाई चुनौति दिन्छ । त्यो कुरालाई नेपाली कांगे्रसले अस्वीकार गरिसकेपछि कुन मनसायले यो देशको पुनर्संरचना जातीय आधारमा गर्नुपर्दछ । भोलि जातियताको आधारमा मुलुकको संरचना तयार भयो भने देशको एकता र अखण्डतालाई चुनौति दिन सकिन्छ, त्यसकारण नेपाली कांगे्रसको स्पष्ट ठहर के हो भने यो राज्य पुनर्संरचनाबाट जुन प्रतिवेदन आयो, यो देशका लागि हित हुन सक्दैन ।
० कस्तो राज्य पुनर्संरचना चाहनुहुन्छ ?
– भोलि राज्यको एकता र अखण्डतालाई चुनौति दिने खालको परिस्थितिको निर्माण नहोस् । देशको स्वधिनता र एकतालाई अडरस्टिमेट गरेर नजाऔं । कसरी एकता र खण्डतालाई मजबुत हुने खालेको संघीय संरचनामा जानुपर्छ भन्ने कांगे्रसको ठहर हो ।
० तपाईंहरु संघीयता विरोधी त होइन ?
– नेपाली कांगे्रस कुनै हालतमा संघीयता विरोधी होइन । नेपाली कांगे्रसको स्पष्ट धारणा संघीयतामा जानुपर्छ भन्ने हो ।
० कस्तो संघीयता चाह्एिको ?
– सबै जात जाति एकै ठाउँमा उभ्योस् र सबै नेपाली समेटियुन् ।
० जातीय राज्यको पक्षमा तपाईंहरु हुनुहुन्छ ?
– नेपाली कांगे्रस जातीय राज्यको पक्षमा छैन ।
० जातीय राज्यमा जादा तपाईंहरुले केको आपत्ती ?
– जातीय राज्यमा जाँदा त्यो समुदायले भोलि हामी छुट्टै प्रदेश बनाउँछौं भन्यो भने के गर्ने ? सबै जात जाति मिलेर बसेको देश हो हाम्रो । कांगे्रसजस्तो जिम्मेवार पार्टीले त्यस्ता कुरामा सहमति दिन मिल्दैन ।
० मोर्चाको मधेश एक प्रदेश नारामा तपाईंहरु सहमत हुनुहुन्छ ?
– त्यसमा हामी सहमत छैन, त्यसबारे कांगे्रसले आप्mनो प्रस्ट विचार राखिसकेको छ । मधेश एक प्रदेश पार्टीको एजेण्डा हुनसक्छ, व्यक्तिको एजेण्डा हुनसक्छ, समग्र मधेशीको यो एजेण्डा हुनसक्दैन ।
० आयोगको प्रतिवेदनको विरोध गर्ने आधार के ?
– नेपाली कांगे्रसले जातीय र क्षेत्रीयताको आधारमा राज्यको पुनर्संरचना गर्न मिल्दैन । यसले देशलाई भोलि ठूलो नोक्सानी पु¥याउँछ । त्यही जातीय कारणले सुडान विभाजन भइछाड्यो । त्यो सुडान काण्ड नेपालमा पुनरावृत्ति नहोस् । जातीयता र क्षेत्रीयतालाई प्राथमिकता दिने कांगे्रसको लिस्टमा छैन ।
० तपाईं मेधशविरोधी नेताको रुपमा देखिन थाल्नुभयो नि ?
– म सडकदेखि सदनसम्म एउटै कुरा बोल्छु । मधेशीको पीडाको उपचार गरिनुपर्छ । दुखाई मुटुमा छ, उपचार खुट्टामा गरेर हुँदैन । संघीयता मात्र मधेशको पीडा होइन, राज्यसत्तामा मधेशको पहुँच पुग्नुपर्छ भन्ने मेरो प्रस्ट धारणा हो ।
० सरकार ढाल्न कांगे्रस कहिलदेखि लाग्छ ?
– सरकार ढाल्न काम कांगे्रसको प्राथमिकतामा पर्दैन । कांगे्रसको प्राथमिकता भनेको शान्ति प्रकृयालाई पूर्णता दिएर लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्नुपर्छ । सरकार यो एजेण्डालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन भने प्रधानमन्त्री डा. बाबुरामजीको पनि औचित्य सकिएको महसुस हुन्छ ।
१४ चैत्र २०६८, मंगलवार ०९:५५ मा प्रकाशित